Famokarana bilaogy: Plugin amin'ny lisitra Checklist ho an'ny WordPress
Talata, Desambra 21, 2010 Alahady 19 Janoary 2014 Robby Slaughter
Niverina tao amin'ny BlogIndiana 2010, nanao fanombohana malefaka ho an'ny plugin WordPress izahay mampitombo ny famokarana mpiasa. Antsoina hoe lisitra fitorahana bilaogy izy io, ary miorina amin'ny herin'ny lisitra fanamarinana tsotra nefa mahatalanjona.
Lisitra fanamarihana bilaogy dia toy ny ahoana ihany ny toa azy: mamorona boaty boaty ho anao hampiasaina rehefa manoratra lahatsoratra bilaogy. Azo antoka fa afaka mahavita zavatra mitovy amin'izany amin'ny rakitra Word na lahatsoratra naoty naoriny ianao, fa amin'ny fampidirana azy ao amin'ny plugin WordPress dia azo inoana kokoa fa hatao manara-penitra sy tena ampiasaina izy io. Toy izao ny endriny:
Dia izay! Afa-tsy, mazava ho azy, azonao atao ny manamboatra ireo entana hahitana izay tianao. Ary ny lisitra fizahana dia miseho amin'ny toerana tena ilaina azo eritreretina, amin'ny pejy Edit Post ihany. Raha mbola eo ianao soratra lahatsoratra iray, azonao atao ny manamarina ireo entana ao amin'ilay lisitra.
Mora ihany koa ny manamboatra ny lisitra. Tsy mila mahalala HTML ianao. (Na dia azonao ampiasaina aza izany raha tianao.) Ity ny pejy admin:
Ny famolavolana ny plugin dia tsy natao ho zavatra hafa ankoatry ny gorodona. Tsy misy voatahiry ny angona rehetra, izay tena tadiavinao mihitsy. Rehefa dinihina tokoa, tokony hatao ny fizahana maso mba hanamafisana fa nanao ny lisitra rehetra ianao. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny dingana toa ny "spellcheck run" na "ampidiro sary stock" na angamba "fitsapana rohy ivelany." Ireo rehetra ireo dia entana fantatrao tokony ataovy isaky ny mitoraka bilaogy ianao, fa amin'ity plugin ity dia azonao atao ny mampahatsiahy anao azy ireo hanao azy ireo rehetra fotoana. Ny tsara indrindra, ny mpanoratra rehetra dia hahita lisitra iray ihany, izay mitondra amin'ny lahatsoratra avo lenta sy avo lenta kokoa.
Maimaimpoana izany ary ampahany amin'ny tahiry ofisialin'ny plugin WordPress. Mikaroha "Lista-fanamarihana amin'ny fanaovana bilaogy" amin'ny fametrahana WordPress anao manokana, na tsidiho ny pejy ofisialy.
Tsara ny lisitra fisavana!
Tags: Analyticsbizmarketingkisary facebookmicrosoft dynamics crmfizarana prMy Notes
Ny fitaovana azontsika ampiasaina ihany no manome lanja